Guddiga Doorashooyinka Puntland TPEC oo muddo kordhin kale u sameysay Ururrada Siyaasada Puntland[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Guddiga Doorashooyinka Puntland TPEC oo muddo kordhin kale u sameysay Ururrada Siyaasada Puntland[Sawirro]
GAROOWE – Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland [TPEC] ayaa mar kale kordhiyay waqtiga loogu talagalay in lagu furto ururrada Siyaasada ee Puntland.
Guddiga oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo shacabka Puntland ba ogaysiinayo in muddo bil ah lagu daray waqtigii horay loogu talagalay in la isku diiwaangeliyo.
Cabdiraxmaan Diiriye Samatar
Guddoomiyaha TPEC Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in guddiga isaga oo tixgelinaya nidaamka geedi socodka Dimoqraadiyada Puntland uu kordhiyay waqtiga kaasoo markii hore ku ekaa bishii hore ee December 2017.
Cabdiraxmaan Diiriye Samatar ayaa qodobada ugu muhiimsan shirkiisa jaraa’id kusoo kooban arrimahan hoose:
Hadaba Maanta oo taariilkhdu tahay 3/January/2018 Guddiga KMG ah ee Doorshooyinka Puntland Waxa uu shacabka Puntland usoo gudbinayaa war-saxaafadeedkan.
Guddigu wuxuu garowsaday in ilaa hada ay is diiwaan geliyeen 4 urrur siyaasadeed oo kala ah (Gar-soor, Umadda, Ubax iyo Himilo).
Guddigu isagoo tix gelinaaya geedi socodka nidaamka xisbiyada badan ee Puntland wuxuu go’aan ku gaaray in uu fursada dheeraad ah siiyo daneeyayaasha siyaasada puntalnd. Sidaa darteed Guddigu waxa uu go’aansay in uu wakhtiga diiwaan gelinta ku daro mudo hal bill ah oo ka billabmaysa 3/Janaury/2018 kuna eeg 3/feberaury/2018.
Guddigu wuxuu ku dhiiri gelinayaa urruradii horay isu diiwan geliyey in ay soo dhamays tiraan shuruudihii looga baahna. Sidoo kale Guddigu wuxuu fursad siinayaanaa siyaasiyiinta danaynaysa in ay urruro siyaasaded furtaan.
Guddigu waxa uu ku war gelinayaa urrurada siyaasada Puntland ee is-diiwaan geliyey iyo kuwa doonaya in ay is-diiwaan geliyaanba in 28/Feberuary/2018 Guddiga bilaabi doono in uu hubiyo in urrurada siyaasada ee is-diiwaan geliyey ay buuxiyeen shuruudaha sharciga ah ee looga baahnaa.
Guddigu wuxuu ku war gelinayaa urrurada siyaasada ee is-diiwan geliyey in guddigu ku casumay 10/01/2018 kulan is-barasho iyo is-xog waraysi ah, Kulanku waxaa uu ka dhici doonaa xarunta dhexe ee guddiga ee Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland ee magaalada garoowe sacaadu marka ay tahay 09:00 am.
Muddo kordhintan ayaa noqoneysa tii 4aad ee uu Guddigu sameeyo tan iyo mudadii uu shaqeynayay.